I-China Prop Prop mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Inkqubo yesinyithi sisixhobo senkxaso esisetyenziswa ngokubanzi ukuxhasa ulwalathiso lwendlela ethe nkqo, ehambelana nenkxaso ethe nkqo yefom form yesakhiwo sayo nayiphi na imilo. Ilula kwaye ibhetyebhetye, kwaye ufakelo lulungile, kuba lusebenzisa uqoqosho kwaye luyasebenza. Ipropu yentsimbi ithatha indawo encinci kwaye kulula ukuyigcina kunye nokuhamba ngayo.
Isixhobo sesinyithi sisixhobo senkxaso esisetyenziswa ngokubanzi ukuxhasa ulwalathiso lwendlela ethe nkqo, ehambelana nenkxaso ethe nkqo yefom form yesakhiwo sayo nayiphi na imilo, ilula kwaye iyaguquguquka, kwaye ufakelo lukulungele, kuba lusonga kwaye lusebenza. ithatha indawo encinci kwaye kulula ukuyigcina nokuyithutha.
Inkqubo yesinyithi iyahlengahlengiswa kuluhlu oluthile kwaye inokuhlengahlengiswa njengoko kufuneka.
Zintathu iintlobo zentsimbi:
1.Ubhubhu ongaphandle ,60, ityhubhu yangaphakathiφ48 (60/48)
Ityhubhu 2.Outer, ityhubhu yangaphakathiφ60 (75/60)
Ipropu yentsimbi yokuqala yayiyipropu yokuqala ehlengahlengiswayo kwihlabathi, eguqula ukwakhiwa. Uyilo olulula nolunobuchule, olwenziwe kwisinyithi esinexabiso eliphezulu ukuya kwinkcazo yentsimbi, iimvume ezihambelana nokusetyenziswa kwezinto ezininzi, kubandakanya nenkxaso yobuxoki, njengonxweme olunxibayo, kunye nenkxaso yethutyana. Iipropu zentsimbi ziyakhawuleza ukumiswa ngamanyathelo amathathu alula kwaye zinokuphathwa ngumntu omnye, ziqinisekisa ukwenziwa kweefom ethembekileyo neyoqoqosho kunye nokusetyenziswa kwezikroba.
1. Intloko kunye nesiseko seplate yokuqinisekisa imiqadi yomthi okanye ukuqhuba ukusetyenziswa kwezixhobo.
2. Ububanzi beetyhubhu zangaphakathi zenza ukuba iityhubhu ezisetafini ezisemgangathweni kunye nezidibanisi zisetyenziselwa iinjongo zokuqinisa.
3. Umbhobho wangaphandle uhlala kwicandelo lomsonto kunye nendawo yohlengahlengiso lokuphakama okuhle. Izihlanganisi zokunciphisa zenza ukuba iityhubhu ezisetafini zomgangatho ziqhagamshelwe kwipropu yentsimbi engaphandle kwityhubhu ukulungiselela iinjongo zokuqinisa.
4. Umsonto kumbhobho wangaphandle ubonelela ngohlengahlengiso oluhle ngaphakathi kwepropu enikiweyo. Umsonto oqingqiweyo ugcina ubukhulu bodonga lombhobho kwaye ngaloo ndlela ugcina amandla aphezulu.
5. Inpropu yipropu yentsimbi ezicoca ngokwakho enomngxuma kwelinye icala ukuze ijike ngokulula xa isiphatho sesixhaso sisondele ezindongeni. An nut eyongezelelweyo inokongezwa ukuguqula ipropu ibe ngumtya wokutsala.
1. Iibhubhu zensimbi eziphezulu ziqinisekisa ukulayishwa okuphezulu.
2. Ukugqitywa okungafaniyo kuyafumaneka, njengoku: ukushushu okushushu, i-galvanization yombane, ukutyabeka umgubo kunye nokupeyinta.
3. Uyilo olukhethekileyo lunqanda umqhubi ukuba angonzakalisi izandla zakhe phakathi kwetyhubhu yangaphakathi nangaphandle.
4. Umbhobho wangaphakathi, i-pin kunye ne-nut ehlengahlengisiweyo yenzelwe ukukhuselwa ekuchaseni ngokungazenzisiyo.
5. Ngobungakanani obufanayo beplate kunye nesiseko seplate, iintloko zepropu (iintloko zefolokhwe) kulula ukuzifaka kumbhobho wangaphakathi nakwityhubhu engaphandle.
6. Iipelethi ezomeleleyo ziqinisekisa ukuthuthwa ngokulula nangokukhuselekileyo.
Okulandelayo: Plastic ekubhalwe Formwork